I-bungalow ye-surf eklanywe ngokwezifiso enikezela ngesipiliyoni seholide esiyingqayizivele enhliziyweni ye-Rincon, e-Puerto Rico. I-bungalow itholakala ngaphakathi kwe-La Casa del Surfer endaweni yangasese efinyelelwa ngokuqondile ukusuka ku-413. Ngaphansi kwe-2 km ukuya e-Maria's, Domes & Tres Palmas (amakhefu okubhukuda) kanye ne-Steps Beach Marine Reserve for snorkeling. Hamba uye emabhishi, iplaza yedolobha, izindawo zokudlela namabha.
Lena i-bungalow esanda kwakhiwa enikeza ukuzizwisa okuphumuzayo "kwe-glamping". Lindela indawo okuzungezile ukuthi ifake uhlaza olumnandi, izihlahla zezithelo nomoya wasolwandle. I-bungalow inomoya ovulekile (ayikho i-AC), ihlanganisa umbhede wendlovukazi owodwa namalineni amasha namathawula, ifriji encane, umenzi wekhofi kanye ne-BBQ. Kunendlu yokugezela yangaphandle yangasese kanye neshawa (sicela uqaphele awekho amanzi ashisayo). Ngemva kosuku elangeni, i-La Casa del Surfer iyindawo enokuthula yokuphumula ngenkathi ulalele ukuphuka kwamagagasi ogwini kanye nokutshiyoza kwe-coqui emfudlaneni. Thola amathiphu angaphakathi kumphathi wakho, funda ukuntweza, ukuzitika ngesiko, lalela umculo ophilayo, nqamula futhi ujabulele isipiliyoni!
I-Rincon yaziwa kakhulu ngokushona kwayo okuhle kwelanga namagagasi asezingeni lomhlaba. Sithola ukukhukhumala okungaguquki emabhishi abheke enyakatho nasenyakatho-ntshonalanga kusukela ngo-Okthoba kuya ku-April. Phakathi nalezi zinyanga, ungathola amagagasi anhlobonhlobo ezindaweni zethu zekhefu, ama-surf akhuthazayo kuwo wonke amazinga. Ugu oluseningizimu yeRincon lunikeza amabhishi okubhukuda amahle anamanzi azolile, acacile, aseCaribbean.
Iplaza yendabuko yaseDowntown Rincón inezinhlobonhlobo zamabha nezindawo zokudlela, izitolo zezikhumbuzo, namabhizinisi endawo.
Umsingathi uhlala endlini ehlukile kule ndawo futhi uzonikeza izivakashi ubumfihlo obuphelele ngesikhathi sokuhlala kwazo. Ngenkathi uthatha izinyathelo zokuphepha ze-COVID-19, umphathi wakho ngeke angene endlini yakho nganoma yisiphi isizathu uma usungenile.
Umsingathi uhlala etholakala futhi uyakuthokozela ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo, noma anikeze izincomo zasendaweni ngocingo, umbhalo, i-WhatsApp, noma umlayezo we-Airbnb.
Umsingathi uhlala endlini ehlukile kule ndawo futhi uzonikeza izivakashi ubumfihlo obuphelele ngesikhathi sokuhlala kwazo. Ngenkathi uthatha izinyathelo zokuphepha ze-COVID-19, ump…